Rapper ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Taylor Swift
On April 3, 2018 By fairy
Pop icon တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Taylor Swift ဟာ အရင်တုန်းက country အဆိုတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို taytay ရဲ့ Hardcore fan အစစ်အမှန်တွေဆိုရင်သိမှာပါနော်။ ပြီးတော့ သီချင်းတွေအများစုကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ဝေဖန်သူတွေကိုလဲ သီချင်းတွေနဲ့ပဲ ပညာသားပါပါ ပြန်လည်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ သူ့စွမ်းရည်ကိုလဲ သိကြတယ်မလား??
Taytay ဆိုထားတဲ့ rap သီချင်းရော နားထောင်ဖူးပြီလား ယူတို့? သီချင်းနာမည်က Thug story တဲ့။ အဲ့သီချင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီး Rapper T-pain နဲ့ တွဲဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Taytay က Rap ဆိုပြီး T-pain က featuring ဆိုထားပေးတာပါ။ ဒီသီချင်းထွက်တုန်းက Taytay ရဲ့ Love Story သီချင်းအရမ်းကိုပေါက်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး Thug story ဟာ Love story ဆိုတဲ့ ကိုယ့်သီချင်းကို ကိုယ်ပြန်ပြောင်ထားတဲ့သီချင်းဖြစ်သလို သူ့ကိုဝေဖန်နေသူတွေကို ပြန်တုံ့ပြန်ထားတဲ့စာသားတွေလည်းပါပါတယ်။
အဲ့တုန်းက အသက် ၁၉နှစ်ပဲရှိသေးပေမယ့် “ဇ” မသေးတဲ့ Taytay ဟာသီချင်းထဲမှာ ရှယ်”စွာ”ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Thug story သီချင်းဟာ official release မလုပ်ပဲ 2009 ခုနှစ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ CMT ဆုပေးပွဲမှာပဲ ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် CMT website မှာ ကြည့်နှုန်းအများဆုံးစံချိန်တင်ထားပါတယ်။ တစ်မိနစ်ခွဲလောက်ပဲကြာတဲ့သီချင်း MTV ထဲမှာ Taylor swift ဟာ အဲ့တုန်းကခေတ်စားခဲ့တဲ့ bling bling တွေဝတ်ပြီး rapper ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး တကယ့် rapper တစ်ယောက်လိုသရုပ်ဆောင်ထားတာ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ သီချင်းထဲမှာ ဘယ်လိုတွေစွာထားတယ်ဆိုတာ ကြည့်သွားလိုက်ပါဦးနော်။
Taytay ဟာ rap သီချင်းတွေကိုလဲကြိုက်နှစ်သက်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက Apple music အတွက် Drake ရဲ့ rap သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Jumpman သီချင်းနဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုရိုက်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ Kendrick Lamar ရဲ့ rap တစ်ပုဒ်ကို lip syncing လုပ်ထားတဲ့ video အတိုလေးတစ်ခုကို သူ့ရဲ့ fan တွေအတွက် share ပေးခဲ့ဖူးတာတွေကတော့ သက်သေပါပဲနော်။
ကိုယ်တွေကတော့ Taytay ဘယ်လိုသီချင်းမျိုးတွေပဲဆိုဆိုချစ်ပြီးသားပါ။ ကဲ Thug story ထဲကလိုမျိုး club တွေမရောက်ရင်တောင် အိမ်မှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ Thug နေကြတဲ့သူတွေရှိရင်လဲ shake သွားကြဦိးနော်…? Yo! Yo!
PREVIOUS POST Previous post: Vogue ရဲ့ မေးခွန်း ၇၃ ခုကိုဖြေလိုက်တဲ့ CL
NEXT POST Next post: မူရင်းအဆိုတော်တွေထက်တောင် အဆိုကောင်းကြတဲ့ Walk off the Earth